အီစိမ့်နေတာပဲ – Grab Love Story
တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ ညတညမှာ နှစ်နှစ်ချြိက်ခြိုက်အိပ်ပျော်နေရာမှ ပူအိုက်လာသလိုခံစားလိုက်ရတာကြောင့်ကျွန်တော်လူးကာလိမ့်ကာနှင့်နိုးလာသည်။ အိပ်မှုံစုံဖွားနဲ့ အဲကွန်းကိုကြည့်လိုက်တော့ဘာမီးမှမလင်း… စိတ်အတော်ညစ်သွားတယ်။ ရန်ကုန်မြို့အစွန်အဖျား၃ထပ် တိုက်ခန်းအတွဲလေးတွေမှာနေမိတာကိုး… ထုံးစံအတိုင်းမီးကပျက်နေပြီလေ။ ကုတင်ဘေးနားရှိတဲ့ပြတင်းပေါက် ကိုထဖွင့်… ပြတင်းပေါက်ကလဲဖွင့်ခဲတော့ကြပ်နေသေးတယ်…. ညကသောက်ထားတဲ့အရှိန်နဲ့ လူကပိုပူနေသလိုခံစားနေရသည်။ ကုတင်ဘေးက အသင့်ထား တဲ့ရေဗူးကိုလှမ်းစမ်းကြည့်တော့လဲရေကုန်နေတယ်…. သက်ပျင်းချရင်း ဓါတ်မီးကို ကုတင်ဘေးက Laptop တင်ထားတဲ့စားပွဲ ပေါ်ကနေစမ်းတဝါးဝါးနှင့်ရှာဖွေပြီးနောက် မီးဖိုချောင်သို့ ရေသွားယူ၊ အပေါ့သွား အခန်းထဲပြန်ဝင်ကာ ခြေပြစ်လက်ပြစ်လှဲချ လိုက်မိသည်။ နာရီကြည့်လိုက်တော့မနက် ၂နာရီထိုးခါနီး… ဟူးးးးး….. သည်ညကိုဘယ်လိုဖြတ်ကျော်ရပါမလိမ့်…..။
ငီးသံလေးကလဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျယ်လာပြီး အမျိုးသားရဲ့ဆောင့်ချက်တွေကလဲပြင်းလာတယ်။ ဒီဘက်ခန်းကကျွန်တော်ကတော့ အသက်ရှူဖို့တောင်သတိမရလောက်အောင် ရင်တွေခုန်ပြီး ပြေးဝင်သွားချင်စိတ်တောင်ပေါက်နေမိတယ်။ သူတို့ရဲ့အသက်ရှူသံတွေပြင်းနေသလို ဒူးထောက်ပြီးချောင်းနေတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ညီလေးကလဲမာန်တင်းပြီးတဆတ်ဆတ်နဲ့တောင် ခုန်နေတယ်။ မရည်ရွယ်ပဲ ညာဘက်လက်ကညီလေးကိုဆုတ်ကိုင်ပြီး သာသာလေးပွတ်လိုက်တော့ စိတ်ထဲမှာ တခုခုကိုကျေနပ်သွားသလိုခံစားလိုက်ရတယ်။ ဒီအချိန်မှာပဲ အမျိုးသားက ဒူးထောက်လိုက်ပြီး အမျိုးသမီးရဲ့ခါးကိုကိုင်ကာ အနောက်ကနေလုပ်မဲ့ပုံစံမျိုးကိုပြောင်းလိုက်တယ်။ အမျိုးသားရဲ့ညီလေးကလဲနောက်ခံမီးရောင်နဲ့မြင်လိုက်ရတာ သူလဲ စံချိန်မှီပဲကိုး…. အမျိုးသမီး လေးဘက်လေးထောက်လိုက်တော့ ဖင်လုံးလေးကလှလိုက်တာလို့စိတ်ထဲတွေးလိုက်မိတယ်။